Ross Ividiyo yenza inani lokufumana inani leshumi elinesithandathu - iVidiyo yeMifanekiso | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » Okufumaneka » Ividiyo yeRoss yenza iNombolo yokuFunyanwa kweshumi elinesithandathu - iVidiyo yeMifanekiso
Ross Ividiyo uyonwabile ukwazisa ukufunyanwa kweVidiyo esekwe eToronto. Imifanekiso yeVidiyo yasekwa ngo-1974-kwangonyaka omnye no-Ross-kwaye yaziwa kakhulu ngeqonga lolawulo lwe-TSI, esetyenziswa ngababoneleli beenethiwekhi abasasazo, iindawo zemidlalo, amaziko evidiyo kunye nezindlu zonqulo. Ngeentengiso kumazwe angaphezulu kwamashumi amabini anesithoba, isiseko sabathengi esinomdla kunye nekhulu leeprotocol zesixhobo ezixhaswayo (ukusukela kwilifa lokudibana ngokulandelelana ukuya kwi-ST2110 workflows yamva nje), iqonga le-TSI liyaqhubeka nokuba yinkokeli kwiklasi yemveliso yeTally kunye ne-UMD.
Oku kufunyanwa - Ross IvidiyoIminyaka elishumi elinesithandathu ukusukela ngo-2009-baya kubona iqela leemveliso zeVidiyo elikhokelwa nguZach Wilkie noDavid Russell, kunye ne-R & D kunye namaqela enkxaso yezobuchwephesha kulo lonke utshintsho oluya eRoss. UZach Wilkie ngoku ngumphathi weMveliso, iRoss Tally Systems, uchulumancile kwithemba lobomi njengenxalenye ye Ross Ividiyo. “Njengenkampani yaseCanada esasekwa kwakuloo nyaka, kuyacaca ukuba sikhule kunye Ross Ividiyo kwaye sikubonile ukukhula okumangalisayo nokwanda kweshishini leRoss, ngakumbi kule minyaka ilishumi idlulileyo. Sonwabe kakhulu ukuba yinxalenye yosapho kwaye oku kuzuza kuya kusinceda sifikelele kwiimarike ezintsha zamazwe aphesheya kwaye sikhule ngokukuko ngakumbi. ”
UDavid Ross, i-CEO, ubonakalisa ukubaluleka kwento ayifumeneyo. “Ngo-1973, utata wayesesibhedlele emva kokophuka umlenze. UJim Leitch, umseki weVidiyo yeLeitch (ngoku Cinga uXhagamshelwano) undwendwele kwaye wacebisa utata wam ukuba aqale inkampani yakhe. Uthe kukho iVidiyo yeLeitch kunye neVidiyo yeMifanekiso eCanada, ke kufanele ukuba kubekhona Ross Ividiyo. Kungenzeka ukuba ukuba iVidiyo yeMifanekiso ibingekho, utata wam ngekhe abenayo imizekelo enjalo yokubonisa indlela, nokuba utata angaqala inkampani yethu, asinakuthiywa ngegama Ross Ividiyo namhlanje! Yonke le minyaka kamva, uMfanekiso ngoku uyinxalenye yeRoss, into evumayo ubawo iyamangalisa. Iqonga le-TSI yomfanekiso iluncedo olukhulu kuluhlu lwezixazululo ezikhoyo kwaye yenza ukuba uRoss azise ukhetho ngakumbi kwimarike yemveliso ekhoyo. ”
Ngolwazi oluthe kratya kwiinkqubo zeRoss Tally, nceda Cofa apha.
Ross Ividiyo -Iimpembelelo eziPhakamileyo, iziSombululo eziPhezulu zoPhuculo lweMveliso
Amandla e-Ross ahlala kwimveliso yevidiyo yeebhiliyoni zababukeli behlabathi mihla le enoluhlu olubanzi kakhulu lomzi mveliso impembelelo ephezulu, ukusebenza kakuhle izisombululo kunye neenkonzo. URoss wenza kube lula ukwenza iindaba ezinyanzelisayo, imozulu kunye nezemidlalo sasazo, Ukubandakanya umxholo we Izikrini zemidlalo yezemidlalo, iinkqubo zolonwabo kunye neekonsathi zerock, amaziko emfundo, Iindibano zomthetho, Inkcazo yequmrhu kunye nomxholo okhuthazayo we izindlu zonqulo.
Izisombululo zeRoss zichukumise abaphulaphuli kunye namaqabane wentengiso ye I-Eurosport, Ihlabathi le-BBC, i-SKY, iGoogle Space kaGoogle kuLondon, kunye ne-esports yamandla aphesheya ESL. URoss ubonelela ngohlobo olungenakuthelekiswa nanto lweemveliso kunye neenkonzo ezibandakanya iikhamera, imizobo eshukumayo yexesha lokwenyani, iiswitshi zemveliso, iinkqubo zekhamera yeerobhothi, inyani eqinisekisiweyo / izitudiyo ezibonakalayo, iiseva zevidiyo, iziseko zophuhliso kunye neendlela, ulawulo lweendaba zosasazo, iinkqubo zegumbi leendaba kunye Iinkonzo zemveliso eziqhubekayo.
Previous: IVelocix ityhila ukuThengiswa kweVidiyo yaBantu abaNtsundu kunye neNkonzo yokuSebenzisa ubuqu
next: Imifanekiso yePace isebenzisa i-Blackmagic Design ukuya kwi-Blur Line phakathi kweMveliso kunye nePosti